Uzalelwe yinj'endlini ukhomishana wamajele e-KZN | News24
Uzalelwe yinj'endlini ukhomishana wamajele e-KZN
Durban - Uzalelwe yinj'endlini ukhomishana wamajele KwaZulu-Natal, uMnikelwa Nxele, emuva kokuchithwa kwesicelo sakhe enkantolo yamacala ezisebenzi eThekwini ngasekuqaleni kwesonto.
Inkantolo ithathe lesi sinqumo ngasekuqaleni kwesonto ngemuva kokuba yena (uNxele) ebhalele inkantolo incwadi eyazisa ukuthi mayithathe isinqumo ngodaba lokumisa kwakhe uKhomishana wesifunda saseThekwini uJabulani Zikhali kodwa ingamkhokhisi (yena) izindleko zecala.
Kulolu daba uMnyango wezokuHlunyeleliswa kweziMilo kuzwelonke ubumelwe ngummeli wasemajajini u-Advocate Guido Penzhorn, ejutshwe ngu-Adv S Jikela kanti uZikhali ubemelwe wuqweqwe lommeli wezezisebenzi uMzolisi Nonyongo.
OLUNYE UDABA: Kuphenywa ngeziqu zomgunyathi enyuvesi
Udaba luthathe cishe imizuzu eyi-15 emuva kokuba u-Adv Penzhorn ecele inkantolo ukuba ichithe isicelo sikaNxele sokuba angazikhokhi izindleko. U-Adv Penzhorn ucele inkantolo ukuba ikhiphe isinqumo sokuba uNxele akhokhe izindleko zommeli omjubile, ngezakhe kanjalo nezomnyango.
Kusukume uNonyongo wathi: "Nkosi yenkantolo, ngibona ukuthi kwakhona lokhu ukuba ummangalelwa abhalele inkantolo incwadi enje kuwukwedelela inkantolo. Ngicela ukuba ikhiphe isinqumo sokuba akhokhele zonke izindleko zommeli kammangali, nezommangali."
Inkantolo ayichithanga sikhathi yasikhipha isinqumo sokuthi uMnu Nxele akhokhe zonke izindleko zaleli cala.
UZikhali uphume ankantolo kuqhilika izihlathi, waxhawula ephindelela ummeli wakhe. Kuvele kwacaca ngesikhathi kuqala icala ukuthi uMnu nxele uphendukelwe ngisho ngabaphathi bakhe kuzwelonke.
Ubengekho enkantolo kanti ubengamelwe muntu. Lolu daba luwumvuka wempi engaphakathi kulo mnyango lapho uMnu Nxele emise emsebenzini uMnu Zikhali ekuqaleni kwalo nyaka, emsola ngokuthi wakokotela iziqu zakhe zeMasters kodwa ikomkhulu lomnyango ePretoria lamkhuza ngaleso senzo, lathi lolu wudaba oluphakathi kwenyuvesi noZikhali.
Kodwa akawulalelanga lowo myalelo, waqhubeka nokummisa kwabe uyinyathele emsileni wafakwa emthethweni, induku yashaya umviki.